Sida loo bixiyo amarrada websaydhka ee Khadka Tooska ah ee Wire Transfer? - HGH Singapore
Sida loo bixiyo amarrada websaydhka ee Khadka Tooska ah ee Wire Transfer?
Si aad lacag ugu dirto wadan kale, u soo gal koontadaada Bangiga ("Bangiyada Internetka", "macmiilka khadka tooska ah") qaybta gudbinta caalamiga, ka dib buuxinta macluumaadka loo baahan yahay ee ku saabsan qofka qaata, waxaad si fudud awood ugu yeelan doontaa inaad lacag ugu dirto dibadda kharashka qaataha.
Bangi kasta oo dalkaaga ka mid ah wuxuu oggol yahay wareejinta SWIFT. Booqasho shaqsiyeed oo aad ku timaado Bangiga una sheegto ujeeddadaada ah inaad macaamil sameyso oo aad Bangiga u siiso macluumaadka ku saabsan qofka qaataha ah si toos ah shaqaalaha Bangiga. Shaqaalaha bangiga ayaa kuu sameyn doona oo kuu dhameystiri doona adiga, nidaamka macaamilku ma qaadan doono wax ka badan 15 daqiiqo.
Si aad lacag ugu dirto dibadda macmiilku wuxuu u baahan yahay inuu ogaado faahfaahinta SWIFT oo dhameystiran oo ku saabsan dadka ama sharciga, kaas oo wareejintiisa loo diri doono.
Loo soo diray: Lacagaha
Next article Bixinta Bitcoins for HGH oo leh kaar deynta - 5 daqiiqo dhiska jeebka Bitcoin